Ungazifaka Kanjani Izizinda Zokuthumela Eziningi kurekhodi lakho le-SPF | Martech Zone
Ungazifaka Kanjani Izizinda Eziningi Zokuthumela Kurekhodi lakho le-SPF
NgoLwesine, Januwari 14, 2021 NgoMsombuluko, Februwari 7, 2022 Douglas Karr
Sandise incwadi yethu yezindaba yamasonto onke (qiniseka ukuthi uyabhalisa!) futhi ngiqaphele ukuthi amazinga ethu okuvula nawokuchofoza aphansi kakhulu. Amathuba ukuthi amaningi alawo ma-imeyili awafiki nhlobo ebhokisini lokungenayo. Enye into esemqoka yayiwukuthi sasine- I-SPF irekhodi – irekhodi lombhalo le-DNS – elingazange likhombise ukuthi umhlinzeki wethu omusha wesevisi ye-imeyili ungomunye wabathumeli bethu. Abahlinzeki besevisi ye-inthanethi basebenzisa leli rekhodi ukuze baqinisekise ukuthi isizinda sakho sigunyaziwe ukuthumela i-imeyili evela kulowo mthumeli.
Njengoba isizinda sethu sisebenzisa i-Google Apps, i-Google besivele siyisethile. Kepha besidinga ukungeza isizinda sesibili. Abanye abantu benza iphutha lokungeza irekhodi elengeziwe. Akusikho ukuthi kusebenza kanjani, empeleni kufanele ube nakho bonke abathumeli abagunyaziwe kwirekhodi elilodwa le-SPF. Nakhu ukuthi irekhodi lethu le-SPF livuselelwa kanjani ngazo zombili Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle futhi Umjikelezo.
martech.zone TXT "v=spf1 zihlanganisa:circupressmail.com zihlanganisa:_spf.google.com ~all"
Kubalulekile ukuthi zonke izizinda ezikuthumela ama-imeyili zifakwe ohlwini lwerekhodi lakho le-SPF, noma i-imeyili yakho ingase ingalenzi ibhokisi lokungenayo. Uma ungazi ukuthi umhlinzeki wakho wesevisi ye-imeyli ufakwe ohlwini lwerekhodi lakho le-SPF noma cha, yenza Ukubheka i-SPF nge-MXToolbox:
Khumbula ukuthi, ngemva kokushintsha irekhodi lakho le-TXT ngolwazi lwe-SPF, kungase kuthathe amahora ambalwa ukuze amaseva wesizinda asakaze izinguquko.
Tags: 250okimeyiliukukhishwa kwe-imeyilii-spf yesizinda esiningiamarekhodi amaningi we-spfukubukwa kwe-spfirekhodi le-spfukubukwa kwerekhodi kwe-spf